China Hydrate maina ranomandry Pack orinasa sy mpamatsy | Huizhou
Ny Huizhou Hydrate Dry Ice Packs dia safidy hafa amin'ny fonosana ranomandry mahazatra eny an-tsena miaraka amin'ireo asany mitovy amin'izany. Ny Huizhou Hydrate Dry Ice Packs dia novolavolaina ho an'ny sakafo vaovao ary koa ireo zavatra marefo amin'ny hafanana hafa mandritra ny fandefasana rojony mangatsiaka, matetika izy ireo dia malaza amin'ny hazan-dranomasina. Ny fonosana ranomandry hydrate dia tokony hitondra ny maripana manodidina amin'ny fonosana iray amin'ny alàlan'ny famindrana hafanana mangatsiaka. Raha ampitahaina amin'ny fonosana gilasy, ny ranomandry ranom-boankazo maina dia mila dingana hafa amin'ny fandraisana rano mialoha alohan'ny hampiasana azy.
1.Huizhou Hydrate Dry Ice Packs dia safidy hafa ho an'ny fonosana ranomandry mahazatra eny an-tsena miaraka amin'ny asany mitovy. Ny Huizhou Hydrate Dry Ice Packs dia novolavolaina ho an'ny sakafo vaovao ary koa ireo zavatra hafa mora tohina amin'ny hafanana mandritra ny fandefasana rojony mangatsiaka, matetika izy ireo dia malaza amin'ny hazan-dranomasina. Ny fonosana ranomandry hydrate dia tokony hitondra ny maripana manodidina amin'ny fonosana iray amin'ny alàlan'ny famindrana hafanana mangatsiaka. Raha ampitahaina amin'ny fonosana gilasy, ny ranomandry ranom-boankazo maina dia mila dingana hafa amin'ny fandraisana rano mialoha alohan'ny hampiasana azy.
2.Hydrate fonosana ranomandry maina vita amin'ny sombiny kely miverimberina misy vovoka granular PCM ao anatiny. Ianao dia afaka farito malalaka ny habeanao miaraka amin'ny sombin-javatra kely ilainao. Ampiasaina betsaka izy ireo amin'ny entana misy rano toy ny sakafo any an-dranomasina ho famonosana na fatotra.
3. Tena manan-danja tokoa ny fampandrosoana maharitra eto an-tany izay ezahantsika hampivelarana fitaovana izay betsaka kokoa sariaka amin'ny tontolo iainana. Ho an'ny ranomandry maina Hydrate, ny fitaovana kitapo ivelany dia azo fidina ho biodegradable taratasy asa-tanana.
1.Hiddrate maina ranomandry maina dia natao hitondrana hatsiaka ny manodidina azy, amin'ny alàlan'ny fifanakalozana rivotra mangatsiaka sy mafana na conduction.
2. Ho an'ny sehatry ny sakafo vaovao dia ampiasaina amin'ny fitaterana vokatra vaovao, mora simba ary hafanana, toy ny: hena, hazan-dranomasina, voankazo & legioma, sakafo voaomana, sakafo mangatsiaka, voninkazo, ronono, sns, indrindra ho an'ny hazan-dranomasina sy ireo entana misy rano na fonosana ary aforitra takiana.
3.Ary ho an'ny fampiasana azy manokana, dia azo ampiasaina amin'ny vonjy taitra, fanaintainana na fanamaivanana amin'ny ratra, mitondra tazo izy ireo. Mandritra izany fotoana izany dia tsara ihany koa izy ireo raha ampiasaina any ivelany raha toa ka napetraka ao anaty kitapo fisakafoana ilay ranomandry misy hydrate, kitapo mangatsiatsiaka kokoa mba hitazomana ny sakafo na zava-pisotro mangatsiaka rehefa mitsangatsangana, fitsangantsanganana, sambo ary fanjonoana.
4. Ho fanampin'izay, raha apetraka ao anaty vata fampangatsiahana ny fonosana misy ranomandry maina mangatsiaka, afaka mamonjy herinaratra na mamoaka hatsiaka ihany koa izy ary mitazona ny vata fampangatsiahana amin'ny hafanana mangatsiaka rehefa maty.
5. Ny fonosana ranomandry maina dia avoaka indrindra amin'ny fitaterana trondro na hazan-dranomasina hafa, toy ny trondro, makamba, foza, trondro, sns.
Sombin-kazo / ravina Size(CM) Fitaovana kitapo Temperature-fiovan'ny toetr'andro
Lamba vita vita amin'ny lamba tsy misy tenona
Fanamarihana: misy famolavolana namboarina.
Ny fonosana ranomandry maina 1.Hdrate dia iray amin'ireo safidy hafa ho an'ny fonosana gilasy mahazatra. Ny tombony azon'izy ireo dia ny mamonosina ny vokatrao na dia efa mangatsiaka aza.
2. Tsy misy poizina, ary andrana miaraka amin'izy ireo Tatitra fanapoizinana am-bava mahery vaika.
3. Fitaterana hazavana sy mora (toy ny vovoka ny fitaovana anatiny): ny fonosana ranomandry maina hydrate dia mijanona ho manify toy ny sombin-taratasy alohan'ny handemana rano mba ho maivana ary hamonjy toerana sarobidy kokoa ho anao.
4. Ny ravina ranomandry maina dia voakapa mora foana amin'ny tadiny noho ny habeny malefaka ary azo aforitra amin'ny fonosana maimaimpoana sy tery.
5.Eo tontolo iainana: Azo ampiasaina miverimberina izy ireo alohan'ny daty lany daty sy misy kitapo ivelany mora simba.
1.Ny rano takiana ary tokony hafangaro alohan'ny hampiasana azy.
2. Ho an'ny fampisehoana tsara indrindra, azafady atsofohy rano mandritra ny 15 minitra ny rano ary alao antoka fa voadio tanteraka ao anaty vata fampangatsiahana, frizera na trano fampangatsiahana izy ireo alohan'ny hampiasana azy.
3.Raha misy fivoahana na fahasimbana, alao rano izy ireo ary ario ny fonosana.
4.Ny Hydrate Dry Ice Pack dia azo ampiasaina miverimberina alohan'ny daty famaranana azy.
5.Raha mihamalefo kokoa ny fonosana ranom-boankazo maina Hydrate noho ny tsy fahampian'ny rano, azafady alao indray rano ampy indray mba hahazoana antoka fa mahomby tsara.
Teo aloha: Ice Biriky
Manaraka: Kitapo misy ranomandry tsindrona rano